Otú E Si Edozi Esemokwu n’Ezinụlọ | Ezinụlọ Inwe Obi Ụtọ
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Gun Haitian Creole Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malagasy Myanmar Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Sesotho (Lesotho) Setswana Slovak Slovenian Spanish Swedish Tagalog Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
Otú E Si Edozi Esemokwu
Di ya sịrị: “Mgbe mụ na Sarah * lụrụ, anyị binyeere ezinụlọ m n’ụlọ nne m na nna m. Otu ụbọchị, onye nwanne m nwoke chọrọ ịlụ rịọrọ m ka m jiri ụgbọala anyị bulaa ya. M kwetara, m wee buru ya na nwa m nwoke ka dị obere. Ma, mgbe m lọtara, iwe ji Sarah. Mụ na ya sewere okwu, ya anọrọ n’ihu ndị ezinụlọ m kwuo na m na-achụ nwaanyị. Iwe were m, m malitere ikwu ihe ndị mere ka iwe ya dịkwuo ọkụ.”
Nwunye ya sịrị: “N’oge ahụ, nwa anyị nwoke na-arịasi ọrịa ike, ego adịghịkwa anyị n’aka. Ya mere, mgbe Fernando buuru onye nwanne ya nwoke chọrọ ịlụ na nwa anyị nwoke pụwa, e nwere ọtụtụ ihe were m iwe. Mgbe ọ lọtara, emere m ka ọ mara otú obi dị m. Anyị sere ezigbo okwu, o nweghịkwa ihe anyị na-agwafọghị ibe anyị. O wutere m nke ukwuu mgbe e mechara.”
Ọ BỤRỤ na di na nwunye esee okwu, ọ̀ pụtara na ha ahụzighị onwe ha n’anya? Ee e! Fernando na Sarah, bụ́ ndị kwuru ihe ndị a dị n’elu, hụrụ onwe ha n’anya nke ukwuu. Ọbụna di na nwunye ndị kacha ebi n’udo na-ese okwu mgbe ụfọdụ.
Gịnị mere di na nwunye ji ese okwu? Gịnị ka i nwere ike ime ka esemokwu ghara imebiri gị alụmdi na nwunye gị? Ebe ọ bụ Chineke hiwere alụmdi na nwunye, anyị kwesịrị inyocha Okwu ya, bụ́ Baịbụl, mara ihe o kwuru banyere nke a.—Jenesis 2:21, 22; 2 Timoti 3:16, 17.
Ịghọta Ihe Ndị Na-akpata Nsogbu
Ọtụtụ di na nwunye chọrọ iji ịhụnanya na obiọma na-emeso ibe ha ihe. Ma, Baịbụl kwuru eziokwu mgbe ọ sịrị na “mmadụ niile emehiewo, ha adịghịkwa eru ebube Chineke.” (Ndị Rom 3:23) Ya mere, mgbe ha nwere nghọtahie, o nwere ike isiri ha ike ijide mmụọ ha. Ọ bụrụkwa na ha amalite ise okwu, o nwere ike isiri ụfọdụ n’ime ha ike nke ukwuu ijide onwe ha ka ha ghara ịkpa àgwà na-adịghị mma, dị ka ịba mba na ikwu okwu mkparị. (Ndị Rom 7:21; Ndị Efesọs 4:31) Olee ihe ndị ọzọ nwere ike ịkpata nsogbu?
Ọtụtụ mgbe, otú di si ekwu ihe dị ya n’obi na-adị iche n’otú nwunye ya si ekwu nke ya. Michiko kwuru, sị: “Mgbe anyị lụrụ ọhụrụ, m chọpụtara na otú di m si ekwu ihe dị ya n’obi dị nnọọ iche n’otú m si ekwu nke m. Ọ na-adị m mma ikwu ihe mere ihe ji mee na otú o si mee, ọ bụghị naanị ikwu ihe merenụ. O yiri ka ihe di m na-achọ ịnụ bụ naanị ihe mechara mee.”
Ọ bụghị naanị Michiko nwere ụdị nsogbu a. N’ọtụtụ alụmdi na nwunye, otu onye nwere ike ịchọ ka ya na di ya ma ọ bụ nwunye ya kwuchaa ihe niile kpatara esemokwu, ma, onye nke ọzọ anaghị achọ ịkpa isiokwu, ọ na-akara ya mma ka a ghara ikwuwe ihe merela eme. Mgbe ụfọdụ, ọ bụrụ na otu onye achọọ ka e kwuwe ihe ahụ merenụ, onye nke ọzọ ana-agbalị ka ha ghara ikwu ya. Ị̀ chọpụtawo ma nke a ọ̀ na-eme n’alụmdi na nwunye gị? Ò yiri ka otu onye n’ime unu ọ̀ na-achọ ka e kwuruo ihe niile merenụ n’isi mgbe niile, ma, onye nke ọzọ ana-achọ ka a hapụ ikwu ya?
Ihe ọzọ e kwesịrị ilebara anya bụ na otú ezinụlọ mmadụ si zụlite ya nwere ike imetụta otú ọ ga-achọ ka ya na di ya ma ọ bụ nwunye ya si na-akparịta ụka. Justin, bụ́ onye lụrụ nwunye kemgbe afọ ise, sịrị: “Esi m n’ezinụlọ na-anaghị ekwu ọtụtụ okwu, ọ na-esikwara m ike ịgwa ndị ọzọ ihe dị m n’obi. Nke a na-ewute nwunye m. Ezinụlọ a mụrụ ya nwere nkwuwa okwu, ọ naghịkwa esiri ya ike ịgwa m ihe dị ya n’obi.”
Gịnị Mere Unu Ga-eji Gbalịa Na-edozi Nsogbu Unu?
Ndị mụrụ banyere alụmdi na nwunye achọpụtawo na ihe e ji ama di na nwunye nwere obi ụtọ abụghị ugboro ole ha na-asị ibe ha ‘ahụrụ m gị n’anya.’ Ọ bụghịkwa inwe mmekọahụ mgbe niile ma ọ bụ inwe ego. Kama nke ahụ, ihe e ji ama di na nwunye nwere obi ụtọ bụ otú di na nwunye si edozi esemokwu ha.
Jizọs kwukwara na mgbe nwoke na nwaanyị lụrụ, ọ bụ Chineke jikọtara ha, ọ bụghị mmadụ. (Matiu 19:4-6) Ya mere, ezi alụmdi na nwunye na-enye Chineke otuto. Ma, ọ bụrụ na di anaghị egosi nwunye ya ịhụnanya, ọ bụrụkwa na ọ naghị elezi ya anya, Jehova bụ́ Chineke agaghị anụ ekpere di ahụ. (1 Pita 3:7) Ọ bụrụ na nwunye anaghị asọpụrụ di ya, ọ bụ Jehova ka ọ na-akparị, n’ihi na ọ bụ Jehova mere di ya onyeisi ezinụlọ.—1 Ndị Kọrịnt 11:3.
Ihe Ndị Na-eme Ka Di na Nwunye Nwee Obi Ụtọ—Ekwula Okwu Na-akpasu Iwe
N’agbanyeghị otú i si ekwupụta ihe dị gị n’obi ma ọ bụ otú ezinụlọ gị si zụlite gị, e nwere ụdị okwu ị na-aghaghị izere ma ọ bụrụ na ị chọrọ ime ihe Baịbụl kwuru na idozi esemokwu nke ọma. Jụọ onwe gị ajụjụ ndị a:
‘M̀ na-agbalị ka m ghara ịgwagwara okwu ọjọọ a gwara m?’
Otu ilu onye maara ihe tụrụ sịrị: “Ọ bụ ịpịsi aka ike n’imi na-akpata ọzọimi, ọ bụkwa iwe iwe na-akpata esemokwu.” (Ilu 30:33) Olee ihe nke a pụtara? Chebara ihe atụ a echiche. Di na nwunye nke na-ekwurịta otú ha ga-esi na-emefu ego (“anyị kwesịrị iselata aka n’ihe anyị na-azụ”) nwere ike hapụ ihe ha na-ekwu gwawazie ibe ha okwu ọjọọ (“ị na-emefukarị ego”). N’ezie, di gị ma ọ bụ nwunye gị nwere ike ‘ịpịsi gị aka ike n’imi’ ma ọ bụrụ na ọ hapụ ihe unu na-ekwu gwawazie gị okwu ọjọọ, i nwekwara ike ịchọ ka ‘ị pịgwara’ ya. Ma, ịgwagwara ya ihe ọ gwara gị ga-eduga naanị n’iwe, meekwa ka esemokwu ka njọ.
Onye so dee Baịbụl bụ́ Jems dọrọ aka ná ntị, sị: “Lee ntakịrị ọkụ ọ na-ewe iji suo oké ọhịa ọkụ! Ire bụ ọkụ.” (Jems 3:5, 6) Ọ bụrụ na di na nwunye achịkwaghị ire ha, obere nghọtahie nwere ike ịghọ esemokwu kpụ ọkụ n’ọnụ. Ịhụnanya anaghịkwa adịgide n’alụmdi na nwunye ọ bụla nke a na-enwekarị ụdị esemokwu ahụ na-enye nsogbu n’obi.
Kama ịgwagwara ihe a gwara gị, ọ́ gaghị adị mma ka i ṅomie Jizọs bụ́ onye ‘na-ekwujọgwaraghị mgbe a na-ekwujọ ya’? (1 Pita 2:23) Ihe kacha mfe ị ga-eme ka esemokwu dajụọ bụ ikweta na ihe di gị ma ọ bụ nwunye gị na-ekwu bụ eziokwu ma rịọ ya arịrịọ maka ihe i mejọrọ.
LEE MA Ị̀ GA-EME IHE A: Mgbe ọ bụla ọzọ unu sere okwu, jụọ onwe gị, sị: ‘Ò nwere ihe ga-emebi ma m̀ kweta ihe di m ma ọ bụ nwunye m kwuru? Olee ihe m mere nke so kpata esemokwu a? Olee ihe mere m na-agaghị arịọ di m ma ọ bụ nwunye m arịrịọ maka ihe m mejọrọ?’
‘M̀ na-eleghara echiche di m ma ọ bụ nwunye m anya?’
Okwu Chineke nyere anyị iwu, sị: “Unu niile, nweenụ otu obi, ka ihe banyere onye ọzọ na-emetụ unu n’obi.” (1 Pita 3:8) Tụlee ihe abụọ nwere ike ime ka ị ghara itinye ndụmọdụ a n’ọrụ. Nke mbụ bụ na o nwere ike ị ghọtaghị ihe di gị ma ọ bụ nwunye gị bu n’obi ma ọ bụ ihe ọ na-eche. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na ihe na-echegbu di gị ma ọ bụ nwunye gị anaghị enyecha gị nsogbu, i nwere ike ịsị, “Obere ihe na-enyekarị gị nsogbu.” Ihe i bu n’obi nwere ike ịbụ ka di gị ma ọ bụ nwunye gị ghara inyewe onwe ya nsogbu gabiga ókè. Ma, ọ bụ mmadụ ole na ole ka ụdị okwu a nwere ike ịkasi obi. Ọ dị ma ndị di ma ndị nwunye mkpa ịmara na ndị ha hụrụ n’anya ghọtara ha nakwa na ihe banyere ha na-emetụ ha n’obi.
Onwe mmadụ iju ya afọ gabiga ókè nwere ike ime ka ọ na-eleghara echiche di ya ma ọ bụ nwunye ya anya. Onye dị mpako na-achọkarị ibuli onwe ya elu site n’iweda ndị ọzọ ala mgbe niile. Otú o nwere ike isi na-eme nke a bụ ịkọ ndị ọzọ ọnụ ma ọ bụ na-akpọ ha ihe masịrị ya. Tụlee banyere ndị Farisii na ndị odeakwụkwọ ndị dịrị ndụ n’oge Jizọs nọ n’ụwa. Ọ bụrụ na onye ọ bụla, ọbụna ndị Farisii ibe ha, ekwuo ihe dị iche n’ihe ndị ahụ dị mpako chere, ihe ha na-eme bụ ịkọ onye ahụ ọnụ na ịkparị ya. (Jọn 7:45-52) Jizọs emeghị otú ahụ. Mgbe ndị mmadụ gwara ya otú ọ dị ha n’obi, ọ na-emetụ ya n’obi.—Matiu 20:29-34; Mak 5:25-34.
Chee echiche ihe ị na-eme mgbe di gị ma ọ bụ nwunye gị gwara gị ihe na-enye ya nsogbu n’obi. Okwu gị, ụda olu gị, na ihu gị, hà na-egosi na ihe na-enye ya nsogbu na-emetụ gị n’obi? Ka ihe ị na-eme ọ̀ bụ igosi ngwa ngwa na ihe ọ na-ekwu adịghị mkpa?
LEE MA Ị̀ GA-EME IHE A: N’izu ndị na-abịa abịa, leba anya n’otú i si agwa di gị ma ọ bụ nwunye gị okwu. Ọ bụrụ na o nwee mgbe i gosiri na ihe di gị ma ọ bụ nwunye gị kwuru abaghị uru ma ọ bụ kwuo okwu wedara ya ala, rịọ ya arịrịọ ozugbo.
‘M̀ na-echekarị na di m ma ọ bụ nwunye m na-achọ naanị ọdịmma nke onwe ya?’
“Ọ̀ bụ n’efu ka Job na-atụ egwu Chineke? Ọ̀ bụ na ị gbaghị ya ogige gburugburu, gbaakwa ụlọ ya na ihe niile o nwere ogige gburugburu?” (Job 1:9, 10) Ihe Setan kwuru bụ na ofufe nwoke ahụ kwesịrị ntụkwasị obi, bụ́ Job, na-efe Chineke esighị ya n’obi.
Ọ bụrụ na di ma ọ bụ nwunye elezighị anya, o nwere ike ịgwa nwunye ya ma ọ bụ di ya ụdị okwu ahụ. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na di gị ma ọ bụ nwunye gị emeere gị ihe ọma, ị̀ na-amalite iche na ọ ga-enwe ihe dị ya mkpa mere o ji mee ya ma ọ bụ na o nwere ihe ọ na-ezochiri gị? Ọ bụrụ na o mehie ihe, ị̀ na-ewere ya na nke ahụ na-egosi na ọ na-achọ ọdịmma onwe ya naanị ma ọ bụ na ọ hụghị gị n’anya? Ị̀ na-echeta ozugbo ihe ndị na-adịghị mma o mere n’oge gara aga ma gụnye ya n’ebe ị gụnyere ibe ya?
LEE MA Ị̀ GA-EME IHE A: Dee ihe ọma di gị ma ọ bụ nwunye gị meere gị na ihe dị mma kpaliri ya ime ha.
Pọl onyeozi dere, sị: ‘Ịhụnanya adịghị agụkọ ihe ọjọọ.’ (1 Ndị Kọrịnt 13:4, 5) Ezi ịhụnanya ekpughị ìsì. Ma, ọ naghịkwa agụkọ ihe ọjọọ. Pọl kwuru na ịhụnanya “na-ekwere ihe niile.” (1 Ndị Kọrịnt 13:7) Nke a apụtaghị na ịhụnanya a na-ekweta ihe niile a gwara ya, kama, ọ na-atụkwasị mmadụ obi. Ọ naghị enyo mmadụ enyo. Ụdị ịhụnanya Baịbụl chọrọ ka anyị nwee na-adị njikere ịgbaghara ndị ọzọ, ọ na-enwekwa obi ike na ndị ọzọ ebughị ihe ọjọọ n’obi. (Abụ Ọma 86:5; Efesọs 4:32) Ọ bụrụ na di na nwunye na-egosi ibe ha ụdị ịhụnanya a, ha ga-enwe obi ụtọ n’alụmdi na nwunye ha.
Gịnị ka di na nwunye ahụ e kwuru okwu ha ná mmalite isiokwu a na-emetaghị?
Olee otú m nwere ike isi zere ime ụdị ihe ahụ n’alụmdi na nwunye m?
Olee ihe e kwuru n’isiokwu a nke m kwesịrị ịrụ ọrụ na ya?
Otú di na nwunye si edozi ihe na-esere ha ga-eme ka ezinụlọ ha sie ike, ha ana-ebikwa n’udo.
Otú E Si Edozi Esemokwu n’Ezinụlọ
Ihe Ga-enyere Ezinụlọ Aka Ịna-ebi n’Udo